ကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်လူငယ်များ၏လိင်ဘဝအသက်တာကို Porn မည်သို့သိမ်းဆည်းမည်နည်း။ Dr. Barbara Winter (၂၀၁၆) - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်သည်
ဆောင်းပါးပါ LINK ဧပြီလ 27, 2016 အားဖြင့် ဒေါက်တာဘာဘရာဆောင်းရာသီ
လိင်ကုထုံးဒေါက်တာဘာဘရာဆောင်းရာသီ porn စွဲဆယ်ကျော်သက်သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရငျးနှီးကိစ္စရပ်များနှင့်ဒုက္ခဖွံ့ဖြိုးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကကျွန်ုပ်မကြာမီအသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်သားလေးကကျွန်ုပ်ဆီလာပြီးမေးလိုက်သည်။ “ အမေ၊ ဘာကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုအာရုံစိုက်ရတာလဲ၊ သူကကျွန်တော့်ကိုမကြာခဏပြောတာကြားဖူးတာနဲ့အမျှကောင်းတာဆိုးတာ၊ ရုပ်ဆိုးတာ၊ ယဉ်ကျေးတာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်လိင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအဓိကထားတာ၊ ဤအရာအများစုသည်မကြာသေးမီကဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့သည်သူ၏ capstone အတန်းထဲတွင်, သူသည်ငါ့ထံမှထံမှခရုမေးလ်အဖုံး၏ရက်ပေါင်း၏ pic ကိုလက်ခံရရှိရန်အံ့အားသင့် (သို့မဟုတ်မဟုတ်) အချိန် "porn ... နှင့် virility ရန်ခြိမ်းခြောက်မှု။ " ဆိုတဲ့
ငါစားသုံးလျှင်သူတွေးမိပါသလား? ဖြစ်ကောင်း။ ကောင်းပြီ, ငါနောက်ကျ-in ကိုတစ်ခုနီးပါးပုံမှန်လုပ်ပေးငါ၏အရုံးခန်း။
စှဲသှားစဉျ, ဒီတစျဦးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောနိုင်ပါတယ်။ porn ပြံ့နှံ့-ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, အမည်မသိ (အများဆုံးဖြစ်ရပ်အတွက်အခမဲ့) နှင့်အများစုဆိုင်တဲ့တတ်နိုင်, လက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခုခဏကျွန်မရဲ့ရုံးအတွက်ယောက်ျား, အဘယ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကန့်သတ်ဖြစ်ပါသည်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျား, တစ်ဦးစပျစ်သီးပြွတ်ရောက်လာမြင်ကြပြီ။ ဒါကသူတို့ရဲ့ penises သူတို့အမှန်တကယ်လူတို့နှင့်အတူရှိသောအခါသူတို့ကိုချင်သောလမျးမအနည်းဆုံးအလုပ်လုပ်ကြသည်မဟုတ်, ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတို့သညျလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, မူးယစ်ဆေးဝါး, Asperger ရဲ့နဲ့ရငျးနှီး၏အခြားကိစ္စများကြောင့်အိပ်ခန်းထဲမှာအခက်အခဲနှင့်အတူကုသမှုများအတွက်ကိုတင်ပြစေခြင်းငှါစဉ်နှင့်အညီ, နံပါတ်များတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်နှင့်ညစ်ညမ်းမကြာခဏတရားခံဖြစ်ပါတယ်။
တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူတစ်စိုက်ထူ get သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဆိုပါနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းလိင်ကုသ၏ရုံးခန်းဖွင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ PIED-Porn-သွေးဆောင် erectile ရောဂါ-ကြောင့်မကြာသေးမီကတံဆိပ်ကပ်ထားပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အမူအကျင့်စွဲ or ဖြစ်စဉ်ကိုစွဲ။ ဒါဟာသတ္တုတွင်း၌ထဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက် rewiring နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ဘို့ဤသည်နေ့ရက်ကာလအပြစ်တင်နေသည်။ ယခုဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏စွဲအိပ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထိခိုက်ကြောင်းပုံရသည်။ ဤပြဿနာကိုယခုခဏအစီရင်ခံထားပါတယ်စဉ်နှင့်အညီ, နံပါတ်များကြီးထွားလာခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရစွဲလမ်းမှုတွင်အပိုင်းအစနှစ်ခုပါဝင်သည်။ သည်းခံစိတ်ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပမာဏတိုးပွားလာရန်လိုအပ်သည်ဟူသောအယူအဆကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထုတ်ယူခြင်းဆိုသည်မှာပစ္စည်းအားဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံသို့ပြန်ရောက်သည်အထိအားနည်းသောလက္ခဏာလက္ခဏာများရှိသည်။ နှစ် ဦး စလုံးဇီဝကမ္မမှီခိုပါဝင်သည်။ ဦး နှောက်၏ dopamine ကိုအသစ်ဖြစ်စေခြင်း၊ အံ့အားသင့်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းတို့ကကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၊ ဤဖြစ်စဉ်ကိုကိုကင်းကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ Porn သည်စိတ်ကူးယဉ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်တစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့ရွေ့လျားခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစစ်အမှန်လူတွေနှင့်အတူစစ်မှန်သောအိပ်ခန်းထဲမှာဖြစ်ပျက်မဟုတ်ပါဘူး။
ဤအယောက်ျားလေးများရငျးနှီးမှာအစစ်အမှန်ခွင့်အလမ်းရှိသည်ခင်မှာသူတို့အွန်လိုင်းဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထဲကအချို့မလုံလောက်တော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့ hardwired ဖြစ်လာကြပါပြီ။
စှဲသှားစဉျ, ဒီတစျဦးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောနိုင်ပါတယ်။ porn ပြံ့နှံ့-ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, အမည်မသိ (အများဆုံးဖြစ်ရပ်အတွက်အခမဲ့) နှင့်အများစုဆိုင်တဲ့တတ်နိုင်, လက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Belinda Luscombe, အရေးသားသူ အချိန်ရဲ့ ဆောင်းပါး, porn မှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုအပေါ်နှစ်ခုစာရင်းဇယားမှတ်ချက်ချ; သူမနှစ်ဦးကိုသီးခြားလေ့လာမှုများပျမ်းမျှအသက် 12 နှင့် 13 ဖြစ်တွေ့ရှိကပြောသည်။
ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းလှုပ်ရှားမှုများကိုစတင်ပါပြီသောသူကဲ့သို့အဖြစ်ကောင်းစွာလူဦးရေအတွင်းကြီးထွားလာနံပါတ်များကိုမြင်ကြပြီ။ ဂယ်ရီ Wilson ကန့်, ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မဗေဒဆရာ, (yourbrainonporn.comခေါင်းစဉ် 2012 အတွက်) Ted-X ကို Talk ကို မဟာ Porn Experiment ယနေ့သန်းခြောက်လကျော်အမြင်များရှိပါတယ်။ သူ့စာတမ်း-porn, အ neuropathways effects အထီးကျန်မှုတွေဖန်တီးနှင့်, ထိုအဖြစ် အချိန် အပိုင်းအစပျေါလှငျ, ကို "လူပျို၏ virility ။ " လြှော့ပေါ့ဂါယူဆပါသည်, 28, Reboot နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်လာပြီးလျှင်ထိုသူတို့၏ဦးနှောက် reboot ဖို့ဘယ်လိုယောက်ျားသင်ပေးတယ်။ သူကယခင်ရောဂါ၏အကျိုးဆက်သောအခွအေနေ (ရှင်းလင်းစွာမြန်နှုန်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်နှင့်သူသည်အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မ sequale အပေါငျးတို့သ reverse နိုင်ရန်အတွက်အရေးပါအရာတစ်ခုခုအအေးကြက်ဆင်သွားသောအခါတစ်ဖုတ်ကောင်များကဲ့သို့ခံစားခဲ့ဘဲလျက် CITES ကအတူ။ ) လုပ်ငန်းစဉ်ထင်ရှားစေခြင်းငှါနေစဉ် (ကြှနျုပျတို့သေး၏အဖြစ်မျှသုတေသနရှိသည်) လူပျိုတို့ကြောင့်အဖြစ်ဆက်စပ်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အမှုနညျးတစျဆငျ့လမ်းလျှောက်အတွက်အကူအညီလိုပါလိမ့်မယ်။
porn စွဲသောဤယောက်ျားလေးလိင်စွဲမဟုတ်ပါဘူးအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောဖော်ပြခဲ့တဲ့အချို့အုပ်စုများ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်နေစဉ်ပြန်လည်နာလန်ထူအချို့ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ သံသယများနှင့်သူတို့ကတကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေးကြည့်နှင့်တူသောခံစားရသောအရာကိုသိသောကြောင့်အသက်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင်ဤလူတို့သညျအဘို့ထက်ပိုမိုလျင်မြန်ကြောင်းသို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ သူတို့တဦးတည်းရှိသည်ကြောင့်သူတို့ဟာမကြာခဏပြန်အခြေခံဖို့ပိုမိုမြန်ဆန်ရနိုင်သည်။
ဤအယောက်ျားလေးများရငျးနှီးမှာအစစ်အမှန်ခွင့်အလမ်းရှိသည်ခင်မှာသူတို့အွန်လိုင်းဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထဲကအချို့မလုံလောက်တော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့ hardwired ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ဤသည်မြင်ကွင်းကသူတို့ကိုသူတို့ဒါကြောင့်မကြာခဏဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံမှာဖြစ်ပျက်မဟုတ်သည့်အနီးကပ်ချိတ်ဆက်ကြားဆက်ဆံရေးရှိခြင်းပင်နိုင်စွမ်းလျှင်သိရန်အခွင့်အလမ်းကိုမပေးပါဘူး။ ပျက်ကွက်ခြင်း, ငြင်းပယ်ခံရနှင့်မှောအဖြစ်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံတစ်အနုတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ရှိရာထိုအပထမဦးဆုံးအတှေ့အကွုံမြားအတွက်ရှိသညျ။ သူတို့ကစိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုဘဲလိင်ရှိသည်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့ညှိတွင်ပိုမိုဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ကညစ်ညမ်း, မဒါ, သူတို့ရဲ့အလောင်းနှင့်လိင်နှင့်အတူကျန်းမာဆကျဆံရေးရှိပုံကိုလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လိင်မကြာခဏတချို့စိတ်ကူးယဉ်ပါဝင်လိမ့်မည် ညစ်ညမ်းတဲ့စိတ်ကူးယဉ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပြီးသူတို့တစ်နေရာတခြားနေဆဲရှင်းလင်းစွာဖြစ်ကြောင်းသတိသို့လက်ရှိပြောင်းရွှေ့ရှိနေသော်လည်း။
Aprilပြီလ ၂၃ ရက်နေ့ Vanity Fair အခမ်းအနားတွင်မင်းသားက“ ငါ့ကိုအရမ်းလေးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အစပျိုးနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ ငါက Playboy မဂ္ဂဇင်းကိုပေးတယ်။ ဒါဟာအလွယ်တကူတက်ခူးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကတော်တော်လေးမိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါထင်တာကငါ့ရဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်တယ်။
ငါစာသင်ချိန်အလယ်၌ဖုံးအုပ်ထားသူကိုကျွန်ုပ်စေလွှတ်သောအခါကျွန်ုပ်၏သားသည်ဘာလုပ်နေသည်ကိုအတိအကျသိသည်။ ကျနော်တို့အနှစ်တစ်ထောင် 24/7 ကြိုးဖြစ်ကြောင်းသိကြ၏ log-on ဟာဖွင့်ထားတယ်။ မိန်းကလေးများသည် Instagram တွင်ရှိနေစဉ်သူသည်သူ၏စိတ်ကူးယဉ်အခြေအနေ (ဘောလုံး) ကိုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် Snapchat ပေးပို့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းဆုံးတော့သူရောသူ၏အတန်းဖော်များကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်နေသည်။
- ပိုမိုကြည့်ရှုပါ - http://goodmenproject.com/featured-content/how-porn-is-hijacking-the-sex-lives-of-our-young-men-bbab/#comment-2358711